Ny fandaniam-poana amin'ny sakafo dia mitaky fiheverana bebe kokoa amin'ny diabem-pizahan-tany sy fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fandaniam-poana amin'ny sakafo dia mitaky fiheverana bebe kokoa amin'ny diabem-pizahan-tany sy fizahan-tany
Io fitomboan'ny fahatsiarovan-tena manodidina ny fandaniam-poana amin'ny sakafo io dia hampitombo ny tsindry amin'ireo orinasa miasa amin'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany fizahan-tany
Laharam-pahamehana ny fampihenana na fanodinana ireo fako ara-tsakafo noho ny areti-mandringana COVID-19
Ny fandraisana andraikitra amin'izao fotoana izao hiadiana amin'ny fandanindaniam-poana ny sakafo avy amin'ny fizahan-tany dia tsy ampy
Ny fanesorana ireo buffet lehibe any amin'ny hotely dia lavitra tokoa amin'ny famongorana tanteraka ny fako ara-tsakafo
Ny antsasaky ny valinteny manerantany tamin'ny fanadihadiana momba ny indostria vaovao dia nanambara fa laharam-pahamehana amin'izy ireo ny fampihenana na fanodinana ireo fako ara-tsakafo noho ny areti-mandringana COVID-19. Ity fampitomboana ny fahatsiarovan-tena manodidina ny fandaniam-poana amin'ny sakafo ity dia hampitombo ny tsindry ataon'ny orinasa miasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Raha ny politika momba ny tontolo iainana no resahina, dia misy hetsika marobe hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fampihenana ny dian-tongotry ny karbaona, saingy ny haavon'ny fiheverana mitovy amin'izany dia tsy omena ny olana momba ny fandanindaniam-poana ny sakafo. Io dia mampiakatra ny fandaniana amin'ny fivezivezena ho an'ny tian'ny trano fandraisam-bahiny ary manalefaka ny mari-pahaizana maitso.
Ny fandraisana andraikitra amin'izao fotoana izao hiadiana amin'ny fandaniam-poana amin'ny fizahan-tany dia tsy ampy - indrindra rehefa mijery manokana ny indostrian'ny fampiantranoana. Iray amin'ireo ohatra maro dia nanantitrantitra i Hilton fa hampihena ny fako amin'ny 50%, fa hatramin'ny 2030, izay fe-potoana lava be.
miaraka Covid-19 manapotika ny taham-ponenan'ireo mpilalao lehibe ao amin'ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny, ny tanjona kendrena amin'ny tontolo iainana dia tokony hihoarana ary hampandrosoina. Ohatra, ny fanesorana buffet lehibe any amin'ny hotely ohatra dia handia tanteraka ny famongorana ny fako ara-tsakafo. Na izany aza, miaraka amin'ireo indostria lasa miovaova kokoa, noforonina ireo fanamby vaovao manodidina ny fandaniam-poana amin'ny sakafo. Ohatra, ny fisian'ny toekarena fizarana ao amin'ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny dia nametraka andraikitra lehibe eo an-tsorok'ireo vahiny raha ny fandanindaniam-poana amin'ny sakafo. Ny fako amin'ny trano tsy miankina dia tsy azo fehezina amin'ny fomba feno toy ny amin'ny hotely, satria hisy fiatraikany ratsy amin'ny traikefan'ny vahiny izany.
Fraport dia manolotra ny fizahana takelaka mandeha ho azy ao amin'ny CargoCity South Airport